Jordania: Governemanta vaovao, Faniriana sy Fanantenana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2011 15:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Deutsch, Español, Nederlands, русский, македонски, English
Notendrena androany ny praiministra vaovao tany Jordania, taorian'ny nandefasan'ny ankamaroan'ny solombavambahoaka taratasy nankany amin'ny mpanjaka Abdallah, izay nitaraina noho ny nataon'ny governemanta notarihan'i Dr Marouf Bakhit. Nametra-pialana i Bakhit ary neken'ny mpanjaka izany.
Ankoatra ny taratasy nalefan'ny solombavambahoaka, ny fialan'i Bakhit dia vokatry ny fielezan'ny hetsika nanohitra ny governemanta nanerana ny firenena hatramin'ny fotoana nanendrena azy. Nisolo toerana azy i Awn Khasawneh, mpitsara iraisampirenena.
Efa nanomboka naneho ny heviny ao amin'ny twitter ny olom-pirenena. Naneho ny fahadisoam-panantenany noho ny fanovana tsy mitsahatra ny governemanta ilay Jordaniana Fadi Samara.
@Fadisamara: nifoha niaraka tamin'ny governemanta vaovao aty Jordania aho. Iza izany Khasawneh izany? Rahoviana no ho tapitra ity fanovana mamotika ity?
Mohammad Abandah kosa faly sady manana fanantenana amin'izao fiovana izao. Hoy izy[ar]:
@MoAbandah: Faly aho sady manana fanantenana satria notendrena ho praiminisitra aty Jordania i Awn Khasawneh. Olo-mendrika izy, manam-pahaizana sady fantatra amin'ny fitiavana ny tanindrazana, amin'ny fahamarinana ary ny rariny.
Ghiya Rushidat tia ny fintaintainana amin'izay hitranga eo amin'ny tontolo politika any Jordania. Hoy izy nanamarika:
@GhiyaRushidat: Mankafy fitaintainana amin'izao fanovana governemanta izao, ary mitsinjo ny hampivelarana ny minisiteran'ny kolontsaina, ny fampianarana, ny raharaham-bahiny, ny atitany ary ny sôsialy.
Naseem Tarawnah miandry fiovana. Hoy izy:
@tarawnah: Manontany tena aho raha eo ankilan'izao zava-mitranga izao dia ho marobe ny tompon'andraikitra hiasa any amin'ny sehatry ny asam-panjakana aty Jordania.
Ary Anas H. Natour kosa taitra. Hoy izy ao amin'ny tweet[ar]:
@AnasNatour: Tsy natory afa-tsy !
Hajian-tsary sainan'i Jordania avy amin'ny mpisera Flickr Argenberg (CC BY 2.0).